ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းလေးခုတွင် ဖူလုံရေး လုပ်သားများ ပြင်ပလူနာ အဖြစ် ဆေးကုသခွင့်ရပြီ - Yangon Media Group
ပန်းလှိုင်နှင့် OSC အပါအဝင် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း လေးခုတွင် မေလမှစတင်ကာ မြို့နယ်အလိုက် ဖူလုံရေးအာမခံလုပ်သား ပြင်ပလူနာများ ဆေးကုသခွင့်ရပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ၊ ထွန်းဖောင် ဒေးရှင်းဆေးရုံ၊ သုခစုစံဆေးခန်းနှင့် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ OSC ဆေးရုံများတွင် ပြင်ပလူနာအဖြစ် ဖူလုံရေးလုပ်သားများ ဆေးကုသခွင့်ရရှိရန် အဆိုပါ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများအနီးရှိ အာမခံလုပ်သားများစာရင်းကို ကောက်ခံပြီးဖြစ် ကြောင်း လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်မောင်အေးက ဒီမိုက ရေစီတူဒေးသို့ ဧပြီ ၃ဝ ရက်က ပြောသည်။
”အဲဒီဆေးရုံတွေရဲ့ အနီးတစ် ဝိုက်က အလုပ်သမားစာရင်းတွေ ကောက်ထားပြီးပြီ။ ရှေ့လမှာ ဆေး ကုသခွင့်စနိုင်မယ်။ အဓိကက တော့ ဆေးရုံကြီးတွေနဲ့ စာချုပ် ချုပ်နိုင်ပြီဆိုရင် အဲဒီဆေးရုံတွေ နဲ့ လက်လှမ်းမီနိုင်တဲ့ အလုပ်သ မားတွေက နေမကောင်းရင် အဲဒီ ဆေးရုံ ပြင်ပလူနာဌာနမှာ ပြလို့ ရတယ်။ ဆေးရုံတက်တဲ့အဆင့် တော့ မပါသေးဘူး။ ပြင်ပလူနာ ဌာနမှာ ပြလို့ရမယ်။ ကုလို့ရမယ်။ လိုအပ်ရင်တော့ အခြားပြည်သူ့ ဆေးရုံတွေ၊ အလုပ်သမားဆေး ရုံတွေကို ပြန်လွှဲမှာပေါ့” ဟု ညွှန် ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်မောင် အေးက ပြောသည်။
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကနှင့်ပူးပေါင်း၍ ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုကို PPP စနစ် ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ အာမခံလုပ်သားများ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ် ငန်းများ လွယ်လင့်တကူ ခံစားရရှိ နိုင်စေရေးနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင် ရွက်ပေးခြင်းသည် အဓိကကျသော လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်သောကြောင့် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဖူလုံရေး လုပ်သား ၁၁ သိန်းကျော်ရှိပြီး အလုပ်သမားဆေးရုံသုံးရုံနှင့် ဆေး ခန်းပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်ဖြင့် ဝန် ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် လူမှုဖူလုံရေးလုပ်သား ခုနစ်သိန်း ခြောက်သောင်းကျော် အာမခံထား ရှိပြီး ဆေးခန်းများထပ်မံဖြည့်တင်း ပေးရန် လိုအပ်နေသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ ဆေး ခန်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တွဲဖက်မင်းသားနှင့် တန်းတူ အနုပညာကြေး ရခဲ့သော ကလယ်ရီဖွိုင်း
ကဘူးလ်မြို့ ၌ အသေခံ ဗုံးဖောက်ခွဲ၊ သတင်းထောက် ရှစ်ဦး အပါအဝင် ၂၉ ဦးသေ
ရခိုင်ပြည်နယ် ဖြစ်စဉ်အပြီး မြန်မာနှင့် EU အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကာအကွယ်ပေးရေး စာချုပ် ??
တိုက်စစ်မှူး ဇင်မင်းထွန်း ညာဘက်လက်ချောင်းကျိုး ဒဏ်ရာကြောင့် တစ်လကျော် အနားယူရမည်
လစာပေးချေမှု ဟန်ချက်ညီစေရန် ရမ်ဆေးကို အာဆင်နယ် သက်တမ်းမတိုးခြင်းဖြစ် ဈေးကွက်တွင် ကစားသမာ??
ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်များစွာ ပါဝင်မည့် ”မိန်းမကြမ်းကြီးများ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား စတင်ရိုက်ကူး